အဖြူရောင်အိမ်လေးတစ်လုံး: စင်ကာပူ ၏ အဦးဆုံးနေ.များ ( ၁ )
စင်ကာပူ ၏ အဦးဆုံးနေ.များ ( ၁ )
အဲသည် နေ.က မှတ်မှတ်ယယ နိုဝင်ဘာလ (၁၁) ရက်နေ. တနင်္ဂံနွေနေ.၊၊ မြန်မာပြည်မှာ အေးလို.ကောင်းနေဆဲ ဆောင်တွင်း ကာလကြီးပေါ. ၊၊ မြန်မာပြည်ကနေ ပြီး မနက် ( ၁၁ ) နာရီလောက် ထွက်လာတာ ဆိုတော. စင်ကာပူ စံတော်ချိန် နေ.လည် (၃ ) နာရီ ခွဲလောက် ရောက်တယ် ဗျာ ၊၊ လာခဲ. တာ ကတော. Silk Air လေကြောင်းလိုင်းနဲ.ပါ ၊၊ ပထမဆုံး ပြည်ပ လေကြောင်းလိုင်းကို စီးဖူး တာဗျ၊၊ ကံကောင်း ချင်တော. window seat လေးလည်း ရ တော. မြန်မာ လေဆိပ် ကြီးကို ကောင်းကောင်းလွမ်းရတာပေါ.ဗျာ၊၊
အဲသည် အချိန်တုန်း က ဖြစ်ခဲတဲ.ခံစားမှုကို ပြန်ဖမ်းကြည်.တော.ခံစား နေရတာက တစ်ခုခုကို လွမ်းနေ သလိုပဲ ၊၊ နောက် ပထမဆုံး အကြိမ်သွားရတဲ.ပြည်ပခရီးစဉ်ဆိုတော.ရင်ခုန် နေတာတော.အမှန်ပဲ၊၊ မရှက် တမ်းဝန်ခံရရင် လေယာဉ်ပေါ် မှာ သူတို.ပြောတဲ. English စကားကို ကျွန်တော် လုံးဝနားမလည်ပါဘူးဆိုတာပါ ပဲ၊၊ အမှန်ကို နားမလည်ခဲ.ရိုးအမှန်ပါ၊၊ အဲသည်မှာ ကျွန်တော် ပထမဆုံး ကြေက်စိတ် လေးတော.၀င်မိတယ်၊၊ ငါအဆင် မှပြေပါ.မလား ဆိုတဲ. အတွေးလေးပဲ၊၊ ပထမဆုံး ဆင်ခြင် မိတဲ. အတွေးလေး ပေါ.၊၊
ကျွန်တော်.ဘ၀မှာ မှတ်မှတ်ယယ ဘယ် English Training Class က်ို မှ ကျားကုတ်ကျားခဲ မသင်ယူခဲ.မိတာ နောင် တရသလို ခံစားရတယ်၊၊ ဒါလည်း အဲသည်တုန်းက ခဏ ပါ ပဲ ၊၊ အခုတော.လည်း Singlish နဲ. အဆင်ပြေသလို ဖြစ်နေတော. English စာလေ.လာဖို.ဆိုတာ နေလာရင် နှင်းပျောက် သလို ခုများတော. အဲသည် တုန်းက စိတ်ကူးလေး ဘယ်ဆီ ရောက်သွား လဲတောင် မသိတော. ပါ ဘူး ၊၊ ကျောင်းသာပြီးသွားရော ဘယ် English class ကို မှ တကယ် မတက်ခဲ.မိဘူး၊၊ကိုယ်ပိုင် လေ.လာလားဆိုတော. လည်း English စာဖတ်ရမှာပျင်းလိုက်တာ ကို လိမ်လို.၊၊ ဘာသာပြန်ဝထ္လုဖတ် ရင်တောင် English နာမည်ဆိုကျော် ဖတ်တာ တကယ်၊၊ ဒီလိုကောင်မှ English မကောင်း ဘယ်လိုကောင်မျိုး English ကောင်းမလဲဗျာ၊၊စဉ်းစားသာကြည်.တော.၊၊
ဒီလိုနဲ. စင်ကာပူ ရောက်ရော ပေါ.ဗျာ ၊၊ ချန်ဂီဆိုတဲ. လေယဉ်ကွင်းကြီး ၊၊ နေ.လည် ခင်းကြီး ဆိုတော. ထင်ထင် လင်းလင်း အားလုံး မြင် နေရတာ ပေါ.ဗျာ ၊၊ သူငယ်ချင်း တွေက မှာလိုက်တယ် Immigration မှာတန်း စီရင် အဖြူ တွေ ရှိတဲ. နောက်မှာ စီတဲ. ၊၊ မြန်မာ များရင် မစီနဲ.တဲ. ၊၊ ဘာ.ကြောင်. လဲတော. ကျွန်တော် လည်း သေချာ မသိဘူး၊၊ သူငယ်ချင်း တွေမှာ ထား တာပေါ.၊၊ မြန်မာဆိုရင် ဂုဏ်ကြီး တဲ. သဘော ပေါ. လေ ၊၊
ကျွန်တော် ကလည်း မေးတက် ၊ ပြောတက်တဲ. အကျင်.ရှိသူ ဆိုတော. လေယာဉ်ပေါ်မှာ တင် သူငယ်ချင်း လေးယောက် ရတယ် ၊၊ သူတို. က ပြောတယ် တုတူ သွားရအောင်တဲ. ၊၊ Ok ပေါ. ၊၊ မှာထားတဲ. သူငယ်ချင်းတွေ သိတာမှတ် လို. ၊၊ ပျော်စရာကြီး ဗျာ၊၊ စုစုပေါင်း ၅ ယောက်ထင်တယ် ။ ရှေးဆုံးက တစ်ယောက် စထိ တယ်ဗျာ ၊၊ White Card မှာ ဖြည်.ထားတာ မှားလို.တဲ. ၊၊ ကိုယ်တော် ကြိးက ခပ်တည်တည်ပဲ ၊၊ ကျွန်တော်.ကို ပြန်လာမေးတယ် ၊၊ ဘယ်မှာ မှားတာလဲတဲ.၊၊ အထုပ်တွေက Immigration Officer ရဲ. Counter ရှေ.မှာ ၊၊ စဉ်းစားသာ ကြည်. ၊၊ ဘယ်လောက် များ ရဲ.၀ံ.လိုက်တဲ. ရွှေမြန်မာ လဲလို. ၊၊
အဲဒီ အချိန်ကျ မှ ကျွန်တော် လည်း ဘာလုပ်ရမယ် မှန်းမသိတော. ဘူး ၊၊ I dont Know , who are you ? တွေဘာတွေ သွားလုပ် လို. မရတော.ဘူးလေ ၊၊ အဲဒီအချိန်မှာ အခြား Counter သွားဖို. စဉ်းစားသေးတယ် ၊၊ ဒါပေမယ်. သိလိုက်ရတဲ. အချိန်မှာ ""ကျွန်တော် က ....................ရောက်နေပြီ အမေ "" ဆိုသလိုပဲ ဘာမှလုပ်လို. မရတော.ဘူး ၊၊
Labels: စင်ကာပူ ၏ အစဦးဆုံး နေ.ရက်များ
... 10:04:00 PM
ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးတော့ ဝင်သွားတယ်မလား။ :) ဒီလိုပါပဲဗျာ။ ရုပ်တည်နဲ့ သာ မုန့်တီသောက်လိုက်။ ဟီးဟီး။ ကျနော်ကတော့ ဝင်ကတည်းက ခပ်ဖြဲဖြဲပဲ။ လာရစ်တဲ့ Officer ကို ပြန်ရစ်တာ။ :D
This is not your hot, this is my hot တော့ မပြောလိုက်ဖူး မဟုတ်လား။ :D
2 April 2009 at 3:59 PM
မြန်မာဆိုရင် ဘာဖြစ်လို့လဲ မောင်လေး
5 April 2009 at 5:32 PM
18 June 2010 at 3:43 PM
နတ်မိမယ် ရဲ့ Hand Made လေးတွေ
ရန်ကုန် မြေမှာ အမှတ်တယ
စင်ကာပူ ၏ အစဦးဆုံး နေ.ရက်များ (၃)
တရားစခန်းဝယ် ၂ ( ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ် နှင်. ဆုံ...
မိဘအပေါ် သိတက်ပါ ၊ ၀န်မပိပါစေနှင်.
စင်ကာပူ၏ အဦးဆုံးနေ.များ (၂)